စိန်ပြေ နပြေရေချိုး နေတဲ့ အမိုက် စားဗီဒီယိုဖိုင် ကို ပုရိသတွေ ကြည့်ဖို့ အ တွက် ဝေမျှ ပေး လိုက်တဲ့ “နန်းမွေစံ” – GaMone Media
Homepage / Celebrity / စိန်ပြေ နပြေရေချိုး နေတဲ့ အမိုက် စားဗီဒီယိုဖိုင် ကို ပုရိသတွေ ကြည့်ဖို့ အ တွက် ဝေမျှ ပေး လိုက်တဲ့ “နန်းမွေစံ”
စိန်ပြေ နပြေရေချိုး နေတဲ့ အမိုက် စားဗီဒီယိုဖိုင် ကို ပုရိသတွေ ကြည့်ဖို့ အ တွက် ဝေမျှ ပေး လိုက်တဲ့ “နန်းမွေစံ”
ပရိသတ်ကြီးရေ ဆက်စီ Model နန်း+မွေ+စံကတော့ ရင်ဖိုစရာ အလှတရားတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါပဲနော်။ သူမရဲ့ ဆက်စီ ဗီဒီယို နဲ့ အလှပုံရိပ်တွေ ကိုလည်း ကိုယ်ပိုင် website ထောင်ကာ အခကြေးငွေဖြင့် ထုတ်လွှင့် ပြသပေးနေတာပါနော်။
တစ်နည်းအားဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေတွေကို သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း နဲ့ ရှာဖွေနိုင် ခဲ့ပြီး သိန်းထောင်ကျော်တန် တိုက်သစ်ကြီးကိုပါ ဝယ် ယူ နိုင်ခဲ့ပါပြီနော်။ မြန်မာပြည်က ပုရိသတွေအတွက်လည်း စွဲမက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို တင်ပေး နေတာပါနော်။
အခုမှာလည်း ရေချိုးနေတဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုဖိုင် ကို နန်းမွေစံရဲ့ Instagram အကောင့်မှာ တင်ပေးလာပြန်ပါပြီနော်။လုံးကြီးပေါက်လှ ခပ် မိုက်မိုက်ပုံစံဖြင့် ရေချိုးပြနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ကို ရှုစားအားပေးကြပါဦး ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဆက္စီ Model နန္း+ေမြ+စံကေတာ့ ရင္ဖိုစရာ အလွတရားေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါပဲေနာ္။ သူမရဲ႕ ဆက္စီ ဗီဒီယို နဲ႔ အလွပုံရိပ္ေတြ ကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္ website ေထာင္ကာ အခေၾကးေငြျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ ျပသေပးေနတာပါေနာ္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြကို သူမရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္း နဲ႔ ရွာေဖြႏိုင္ ခဲ့ၿပီး သိန္းေထာင္ေက်ာ္တန္ တိုက္သစ္ႀကီးကိုပါ ဝယ္ ယူ ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီေနာ္။ ျမန္မာျပည္က ပုရိသေတြအတြက္လည္း စြဲမက္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြကို တင္ေပး ေနတာပါေနာ္။
အခုမွာလည္း ေရခ်ိဳးေနတဲ့ အလန္းစား ဗီဒီယိုဖိုင္ ကို နန္းေမြစံရဲ႕ Instagram အေကာင့္မွာ တင္ေပးလာျပန္ပါၿပီေနာ္။လုံးႀကီးေပါက္လွ ခပ္ မိုက္မိုက္ပုံစံျဖင့္ ေရခ်ိဳးျပေနတဲ့ နန္းေမြစံရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ ကို ရႈစားအားေပးၾကပါဦး ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
Previous post စစ်ဘေး ဒုက္ခကို ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတချို့ အတွက် ဖိနပ်လေးတွေ ကို သွားရောက် လှူဒါန်းပေး ခဲ့ကြတဲ့ အလှူရှင် တစ်စု
Next post လူမမယ်ကလေး တွေ ကို မွေးစားတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမ ရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ ခံယူချက် ကို ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ